Adịla Punk, bụrụ Hunk na Chọnye Ọdịnaya Gị | Martech Zone
Adịla Punk, bụrụ Hunk na Chọnye Ọdịnaya Gị
Sunday, Eprel 22, 2007 Satọde, Febụwarị 20, 2016 Douglas Karr
na stunk, ndo! Olileanya, ọ dọọrọ uche gị. Dan Zarrella nwere ọmarịcha ọkwa na ịhapụ ọdịnaya gị. Ana m ekwughachi ụfọdụ ndụmọdụ ya ma tụba ntakịrị nke m.
Enweela ọtụtụ nyocha banyere omume ndị ọbịa na websaịtị na otu ha si agụ ma na-agagharị isiokwu na ibe na ihe nchọgharị weebụ. Commonzọ a na-ahụkarị maka ndị ọbịa weebụ bụ ịgụ data ma ọ bụ isi okwu na iberibe kama iguta akwukwo di n'elu. Onwe m, agbasiwo m ike ide ụzọ a, mana m na-anwale. Ikewapu ọdịnaya nke isiokwu nwere ike inwe obi ike, agba dị iche, ma ọ bụ buru ibu buru ibu ga-enye ndị ọbịa gị ohere inyocha ọdịnaya gị ngwa ngwa. Na mgbakwunye, iwepu paragraf gị na-enyere ndị ọrụ aka inyocha ngwa ngwa, oge ụfọdụ na-awụda site na mbido ahịrịokwu wee mepee ahịrịokwu kama ịgụpụta nkọwa niile dị n'etiti.
You nwetara ihe niile ahụ?
Ikekwe… ma eleghị anya ọ bụghị! Nwere ike ịrị elu ozugbo na nke a mmaa. Dee edemede na ederede gị n'ụzọ ụfọdụ maka igodo na nghọta dị mfe:
Jiri Ederede Nwere Obi Ike - na-apụ apụ, ọ bụghị ya?
Jiri Isiokwu nta - isiokwu nta ekwe ka folks ngwa ngwa i scanomi ọdịnaya.
Jiri Ederede Paragraf - oghere na-ekewa ọdịnaya ahụ na-enye ndị ọbịa ohere ịgụ ahịrịokwu mmeghe ngwa ngwa.
Jiri akwukwo edeputara na onu ogugu - a haziri nke a ma dịkwa mfe ọgụgụ.
Dee 5 ka 10 Chunks - gbalịa ịbelata ma nọgidesie ike na ọnụọgụ paragraf (yabụ chunks) na ọdịnaya gị. Uche ga-enyere aka na njigide ndị na - agụ ya n'ihi na ị na - atụ anya ndị na - agụ ya.
Achọghị m igbu ọkara nke mbụ nke isiokwu a na nzube, ọ gosipụtara, ọ bụghị ya? Ohere inweta bu na igughi paragraf ahu zuru oke.
Ọ bụghị naanị maka blọọgụ!
Enwere m ikpe mara dị ka onye ọ bụla na ịghara ịkụnye, mana m ga-agbasi mbọ ike na ya. Ikwesiri, kari… obu ebe nrụọrụ weebụ gi ma obu blog gi, ndi obia ga-ejigide ihe banyere saiti gi na isiokwu ya ma oburu na igaghi acho. Mgbe ha chetakwara ihe ọzọ, ha ga-alaghachikwute ọzọ!
Tags: iberibenghọtaọdịnaya ọdịnayanhazi ọdịnayanyocha ọdịnayaDan zarrella
Technorati ọkwa WordPress ngwa mgbakwunye Version 2.0.4 wepụtara
A degharịa Akwụkwọ Onyinye Efu!
Doug, ezigbo ndụmọdụ, m na-eji isi okwu na isiokwu nke ndị isi maka na amaara m na ha dị mkpụmkpụ ma nwee ike ikpebi ọsịsọ ma leta m kwesịrị oge ha